Jeremiah 40 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
4 Kaloku ke yabonayabona, ndiyayicombulula namhla imixokelelwane esezandleni zakho. Ukuba kuthe kwalunga emehlweni akho ukuya nam eBhabheli, yizayiza, ndolimisa iliso lam kuwe; ukuba kuthe kwakubi emehlweni akho ukuya nam eBhabheli, yeka ke. Uyabona, ilizweilizwe lonke liphambi kwakho; ukuya apho kuthe kwalunga kwathi tye emehlweni akho, oko kokwakho, yiya khona.
8 Beza ke kuGedaliya eMizpa, inguIshmayeli unyanaunyana kaNetaniya, noYohanan noYonatan oonyana bakaKareba, noSeraya unyanaunyana kaTanumete, noonyana bakaEfayi waseNetofa, noYezaniya umntu waseMahaka, bona namadoda abo.
14 Bathi kuye, Uhleli usazi na ukuba uBhahalisi, ukumkani woonyana baka-Amon, uthume uIshmayeli unyanaunyana kaNetaniya, ukuba akubulale? Ke uGedaliya unyanaunyana ka-Ahikam ubengakholwa ngabo.
15 UYohanan unyanaunyana kaKareha wathetha kuGedaliya ngasese eMizpa, wathi, Makhe ndiye ndimbulale uIshmayeli unyanaunyana kaNetaniya, kungazi mntu; yini na ukuba ade abulale wena, achithwachithwe amaYuda onke ahlanganisene kuwe, atshabalale amasalela akwaYuda?